Montessori Training Myanmar
Learn the Montessori Way
Please contact us with the Workshop title, date and time that you are interested. We will get back to you with the fees in mmk and Myanmar bank details.
All workshops are in English.
We do have teaching materials for schools or parents that require them.
Viber / Whatsapp: +66 613873515
* မွန်တက်ဆိုရီဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ပုံစံ ပြင်ဆင်ရမည့်အချက်များကို သင်ကြားပေးခြင်း၊
* ကလေးကိုသင်ကြားပေးရမည့်နည်းလမ်းများ Activity များကိုသင်ကြားပေးခြင်း
* မွေးစ မှ ၆ လ (၀-၆) အတွင်းရှိကလေးများရဲ့ ဖွ့ံဖြိုးမှု့အကြောင်းကို သင်ကြားပေးခြင်း
* အသုံးအဆောင်၊ ကစားရမည့်ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ပေးခြင်း
အစရှိသည့် အကြောင်းအရာပေါင်းများစွာကို အသေးစိတ် သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
* မွန်တက်ဆိုရီဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ပုံစံ ပြင်ဆင်ရမည့်အချက်များကို အသေးစိတ်နားလည်သွားပြီး အိမ်(သို့)ကျောင်းမှာ အလွယ်တကူ ပြန်လည်ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
* မွေးစ မှ ၆ လ (၀-၆) အတွင်းရှိကလေးများရဲ့ ဖွ့ံဖြိုးမှု့အကြောင်းကို အသေးစိတ် နားလည်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
* ကလေးတွေရဲ့ ဖွ့ံဖြိုးမှု့အလိုက် ကလေးရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်စွက်သင်ကြားပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
* ကလေးရဲ့ပျော်ရွှင်စွာ လေ့လာစူးစမ်းရင်း
အားသင့်ဖွယ် ကြီးပြင်းလာမှု့ကို သင်ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ မြင်တွေ့နိုင်မယ့်အ​ေတွ့အကြုံကောင်းတခုကိုပါ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
* မွေးစ မှ ၆ လ (၀-၆) အတွင်းရှိ ကလေးရှိတဲ့မိဘများ
* ေန့ကလေးထိန်းဆရာ/ဆရာမများ နှင့် မူကြိုဆရာ/ဆရာမများ
Montessori Training 0-17m
Study LIVE with the trainer
Mondays / 7.20 - 8.30pm (Myanmar Time)
2.20 hours /2sessions
September 20 & 27, 2021
October 18 & 25, 2021
November 22 & 29, 2021
December 20 & 27, 2021
Group of two: 120,000mmk
Bank Transfer KBZ, Credit card
(Tax may be added to your total)
ကလေးတွေရဲ့ ပထမအစ ၃နှစ်ဟာ ကျန်တဲ့အချိန်တွေထက်ပိုပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမြန်တဲ့ အတွက် သင်ယူနိုင်စွမ်း ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒီအရွယ်ကလေးတွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို စူးစမ်းလေ့လာရင်း သင်ယူလေ့လာကြပါတယ်။
Montessori for Toddlers မတ်တပ်ပြေးအရွယ်ကလေးတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုတဲ့ ဒီ မွန်တက်ဆိုရီသင်တန်းမှာ အကျိုးအကြောင်းဆပ်စပ်မှု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ ဘာသာဗေဒဖွံ့ဖြိုးမှု၊ ကြွက်သားကြီး ကြွက်သားငယ် ကိုယ်ခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးမှုများအပြင် လိမ္မာယဉ်ကျေးပြီး ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်တဲ့ ကလေးတွေဖြစ် အောင် သင်ကြားပေးရမည့်သင်ခန်းစာများစွာ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မွန်တက်ဆိုရီဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ပုံစံ ပြင်ဆင်ရမည့်အချက်များကို သင်ကြားပေးခြင်း၊
က​​လေးတွေအတွက် ငယ်စဉ်မှစ၍ အသက်အရွယ်အလိုက် တတ်မြောက်ရမည့်
မွန်တက်ဆိုရီဆိုင်ရာ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများအသုံးပြုပုံကို သင်ကြားပေးခြင်း၊
ကိုယ်အားကိုယ်ကိုးတတ်သည့်ကလေးများဖြစ်အောင် အစားအသောက်ပြင်ဆင် လုပ်ကိုင်နည်းများ သင်ကြားပေးခြင်း (ဥပမာ- အခွံနွှာခြင်း၊ လှီး​ဖြတ်ခြင်း၊ အစားအစာများကိုခင်းကျင်းပြင်ဆင်ခြင်း)
သင်ကြားနည်းအသေးစိတ် lesson plan ကို သင်ကြားပေးခြင်း အစရှိသည့် အကြောင်းအရာပေါင်း များစွာကို အသေးစိတ် သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းတက်ပြီးရင် ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရမှာလဲ ❓
မတ်တပ်ပြေးအရွယ် Toddlers ကလေးများရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအကြောင်းကို အသေးစိတ် နားလည်သိရှိ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေရဲ့ အသက်အရွယ်အလိုက် တတ်သင့်သည့် အမှန်တကယ် လိုအပ်သောသင်ခန်းစာများကို သင်ကြားပေးနိုင်ပြီး မှန်ကန်သော မွန်တက်ဆိုရီ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများကိုပါ ရွေးချယ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအလိုက် ကလေးရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်စွက်သင်ကြားပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေ အလိုအလျောက် စူးစမ်းလေ့လာသင်ကြားတဲ့အခါ ကိုယ်တိုင်မသိရှိပဲသင်ကြားမှုကို အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်တဲ့ အချက်များစွာကို သိရှိနားလည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးရဲ့ပျော်ရွှင်စွာ လေ့လာစူးစမ်းရင်း အံ့အားသင့်ဖွယ် ကြီးပြင်းလာမှု့ကို သင်ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ မြင်တွေ့နိုင်မယ့်အ​‌တွေ့အကြုံကောင်းတခုကိုပါ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
မွေးစ မှ ၃ နှစ် (၀-၃) အတွင်းရှိ ကလေးရှိတဲ့မိဘများ
နေ့ကလေးထိန်းဆရာ/ဆရာမများ နှင့် မူကြိုဆရာ/ဆရာမများ
Please contact for dates, venue & fees. All courses are in English, if you needatranslator please let us know.
Montessori Education Workshop 3-6y
နိုင်ငံတကာကျောင်းတွေမှာ မွန်တက်ဆိုရီ ပညာရေးကို ဘယ်လိုသင်ကြားပေးနေလဲဆိုတာ အသေးစိတ်သိရှိချင် တဲ့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ မိဘများ၊ဆရာ/ဆရာမများ လက်တွေ့လေ့လာသင်ကြားရမည့် workshop ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနည်းလမ်းကောင်းများကို အိမ်မှာလဲကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ သင်ကြားပေးနိုင်မည့် နည်းလမ်းကောင်းများစွာကို သိရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မွန်တက်ဆိုရီ ပညာရေးအကြောင်းကို ၂ ရက်သင်ကြားရမှာပါ။
Day 1 (ပထမနေ့)
1. မွန်တက်ဆိုရီ ပညာရေးအကြောင်းသင်ကြားခြင်း
2. မွန်တက်ဆိုရီသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်ပါဝင်သော ဘာသာရပ် (5) ခုအကြောင်း သင်ကြားခြင်း
3. မိမိကျောင်း နှင့် အိမ်တွင် မွန်တက်ဆိုရီဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ပုံစံ ပြင်ဆင်ရမည့်အချက်များကို သင်ကြားခြင်း
4. အသက် ၃ နှစ်မှ ၆ နှစ်အရွယ် က​လေးများအတွက် မွန်တက်ဆိုရီဆိုင်ရာ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများ အသုံးပြုပုံကို သင်ကြားခြင်း
Day2( ဒုတိယနေ့)
1. မွန်တက်ဆိုရီဆိုင်ရာ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများအသုံးပြုပုံကို ဆက်လက်သင်ကြားခြင်း
2. ​​နေ့စဉ်သင်ကြားပေးရမည့် မွန်တက်ဆိုရီ သင်ခန်းစာများပြုလုပ်နည်းများကို သင်ကြားခြင်း
3. သိပ္ပံ နှင့် သင်္ချာ ဘာသာရပ်ကဲ့သို့ ခက်ခဲသော ဘာသာရပ်များကို ပိုမိုပြီးအသေးစိတ်သင်ကြားနိုင်အောင် သင်ကြားခြင်း
4. သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ကျောင်းသားများအား စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နည်းများ သင်ကြားခြင်း
မွန်တက်ဆိုရီ ပညာရေး၏ သဘောတရား ခံယူချက်များကို အသေးစိတ်သိရှိ နားလည်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာသင်ခန်းတွင် မွန်တက်ဆိုရီဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ပုံစံ ပြင်ဆင်ရမည့်အချက်များကို သိရှိနားလည်ပြီး ခင်းကျင်းတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မွန်တက်ဆိုရီသင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ အသုံးပြုပုံကို အသေးစိတ်နားလည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မွန်တက်ဆိုရီ စာသင်ခန်းအတွင်း ကျောင်းသားများ၏ လေ့လာသင်ကြားမှု့များကို ဘယ်လိုမြှင့်တင် သင်ကြားပေးရမည့် သင်ကြားနည်းများကိုပါ သိရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မွေးစ မှ ၆ နှစ် (၀-၆) အတွင်းရှိ ကလေးရှိတဲ့မိဘများ၊ အဖိုး၊အဖွားများ
နေ့ကလေးထိန်းဆရာ/ဆရာမများ နှင့် မူကြိုဆရာ/ဆရာမများ၊ ကျောင်းအုပ်၊ကျောင်းပိုင်ရှင်များ
မွန်တက်ဆိုရီပညာရေးကို စိတ်ဝင်စားပြီး လက်တွေ့လေ့လာသင်ကြားချင်သူများ
The Montessori Education Workshop 3-6y isacontinuing professional development course offered by Montessori Elements. The course is practical, applicable, affordable and enjoyable. It helps educators to keep their professional knowledge and skills updated.
Interested in Workshops at School? Contact us.
Online Shop | Training | Consulting
© Montessori Elements . All rights reserved.